फेरी बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कुनको कति पुग्यो ? हेर्नुहोस् – Ap Nepal
फेरी बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कुनको कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । बढेको मूल्य आज राति १२ बजेदेखि लागू हुनेछ । निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु दुई तथा डिजेल र मट्टितेलमा पनि प्रतिलिटर रु दुई नै वृद्धि गरिएको छ ।
नयाँ मूल्यअनुसार अब पेट्रोल प्रतिलिटर रु १३० पुगेको छ । यस्तै डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर रु ११३ पुगेको छ ।
यसअघि पेट्रोल प्रतिलिटर रु १२८, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर रु १११ मा बिक्री हुँदै आएको थियो । निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु २५ ले वृद्धि गरेको छ । यसअघि प्रतिसिलिण्डर रु एक हजार ४२५ मा कारोबार हुँदै आएको ग्यास अब रु एक हजार ४५० पुगेको छ ।
आन्तरिक तर्फको हवाई इन्धनको मूल्यसमेत प्रतिलिटर रु दुईले वृद्धि भई रु ८६ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनतर्फ प्रतिकिलो १६ डलरले वृद्धि गरी ७७० अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ ।
मूल्य बढाउँदा समेत पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ४२ पैसा, डिजलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ६४ पैसा र ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ४२० रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा रहेको निगमको जिकिर छ ।
निषेधाज्ञा जारी रहेको अवस्थामा पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै निगमलाई रु ९६ करोड नौ लाख घाटा हुने देखिएको छ । निगमका अनुसार पेट्रोलमा कूल रु १९ करोड, डिजलमा रु १९ करोड छ लाख र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा रु ६२ करोड २२ लाख बराबरको घाटा रहेको छ ।
इण्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त पछिल्लो मूल्य सूचीअनुसार पछिल्लो १५ दिनमा रु एक अर्ब १५ करोड २२ लाख बराबरको घाटा हुने देखिएपछि मूल्य वृद्धि गरिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । भारतीय सीमा क्षेत्रमा पेट्रोल प्रतिलिटर ४१ रुपैयाँ १९ पैसा, डिजेल प्रतिलिटर ४४ रुपैयाँ ४ पैसा नेपालतर्फ सस्तो रहेको छ ।रातोपाटीबाट
Prevस्मारिका ढकाल (चर्चित टिकटक स्टार)को भयो डिभोर्स , लाइभमा आएर पूर्वपति विवेकले सबैमा गरे यस्तो अनुरोध – हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
Nextटिक-टक भाइरल बागलु, ङकी दिपा थापा मगरको घरमा पुग्दा लास्टै पेट मिची मिची हसाइन, यति ठुलो सपना बोकेर का,ठमाडौ हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
नायिका प्रियंका कार्कीलाई सन्तान लाभ, जुराइन् यो नाम…
जाँदा-जाँदै रवी लामिछानेले भने !- अन्तिम र मुख्य रिʼपोर्टमा नै कैचि लाईयो, देशको लागी प्रधानमन्त्री बन्न तʼयार छु (भिडिʼयो सहित)
एटी, एमबाट कार्ड बिना यसरी निकाल्न सकि’न्छ पैसा हेर्नुहोस